Iindaba - Ababhikishi base-UK badiliza umfanekiso wekhoboka le-17th eBristol
Abaqhankqalazi base-UK badiliza umfanekiso oqingqiweyo womrhwebi wamakhoboka wenkulungwane ye-17 eBristol
LONDON - Umfanekiso oqingqiweyo womrhwebi wamakhoboka wenkulungwane ye-17 kwidolophu yaseBritani esemazantsi eBristol wadilizwa phantsi ngabaqhankqalazi "ngeeNkcubeko eziMnyama" ngeCawa.
Imifanekiso eshukumayo kwimithombo yeendaba zentlalo ibonakalise abaqhankqalazi bekrazula umfanekiso ka-Edward Colston ukusuka kwi-plinth yayo ngexesha loqhanqalazo embindini wedolophu. Kwividiyo kamva, abaqhankqalazi babonwa beyilahla kuMlambo iAvon.
Umfanekiso oqingqiweyo wobhedu kaColston, owayesebenzela iRoyal African Company kwaye kamva wakhonza njengelungu le-Tory MP yase-Bristol, wayemi embindini wedolophu ukusukela nge-1895, kwaye ibingumbandela wengxabano kule minyaka idlulileyo emva kokuba abaqhankqalazi bephikisile ukuba akafanele abe esidlangalaleni. yamkelwe yidolophu.
Umproteoter uJohn McAllister, 71, uxelele oonondaba basekuhlaleni: “Le ndoda yayingumthengisi wamakhoboka. Wayenenceba kwiBristol kodwa yayingaphandle kobukhoboka kwaye iyacekiseka. Isisithuko kubantu baseBristol. ”
Intsumpa yamapolisa asekuhlaleni uAndy Bennett uthe ngabantu abamalunga ne-10, 000 abebezimase imiboniso yoBomi obuMnyama eBristol kwaye uninzi lwenze oko “ngoxolo”. Nangona kunjalo, "bekukho iqela elincinci labantu elenze ngokucacileyo isenzo sokonakalisa ulwaphulo-mthetho ekutsaleni ezantsi umfanekiso oqingqiweyo kufutshane neBristol Harborside," utshilo.
UBennett uthe uphando luzakwenziwa ukuze kuchongwe abo bachaphazelekayo.
NgeCawa, amashumi amawaka abantu bajoyine usuku lwesibini loqhanqalazo lokulwa ubuhlanga kwizixeko zase-Bhritane, kubandakanya iLondon, iManchester, iCardiff, iLeicester kunye neSheffield.
Amawakawaka abantu ahlanganisene eLondon, uninzi lwabo lunxibe izigubungelo ebusweni kwaye uninzi luneeglavu, ingxelo ye-BBC.
Komnye woqhanqalazo olwenzeka ngaphandle kwindlu yozakuzo yaseMelika kumbindi weLondon, abaqhankqalazi baguqe ngedolo elinye baphakamisa amanqindi abo emoyeni phakathi "kokuthula bubundlobongela" kwaye "umbala ayilolwaphulo mthetho," yatsho ingxelo.
Kweminye imiboniso, abanye abaqhankqalazi babephethe imiqondiso ebhekisa kwi-coronavirus, kubandakanya leyo ifundeka ngoluhlobo: "Kukho intsholongwane enkulu kune-COVID-19 kwaye ibizwa ngokuba bubuhlanga." Abaqhankqalazi baguqa ngenzolo phambi komzuzu phambi kokukhala besithi "akukho bulungisa, akukho xolo" kwaye "ubomi babantsundu buyinto ebalulekileyo," yatsho i-BBC.
Uqhanqalazo lwase-Bhritane lwaluyinxalenye yomtsalane omkhulu owenziwa kwilizwe liphela ngokubulawa kuka-George Floyd, wase-Afrika ongaxhobanga.
UFloyd, 46, usweleke nge-25 kaMeyi kwisixeko sase-US iMinneapolis emva kokuba ipolisa elimhlophe liguqe entanyeni phantse imizuzu elithoba ngelixa ebotshelelwe izandla ejonge phantsi kwaye ephindaphinda esithi akakwazi ukuphefumla.